Maraykanka Oo Sheegay Inay Bishaan Somalia Ka Fuliyeen Duqeyntii Ugu Badnayd Muddo 10-Sanno – Hornafrik Media Network
War-saxafaadeed ka soo baxay Taliska Milliteriga Maraykanka ka jooga Qaaradda Afrika ee AFRICOM ayey ku sheegeen inay bishan tahay tii ay ugu dhaqdhaqaaqa badnaayeen abid ee ay Duqeymo ka fuliyaan gudaha Somalia.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Kala-barka bishan November oo keliya ay fuliyeen duqeymo ka badan kuwii ay fuliyeen tan iyo markii ay Hawlgalka Duqeymaha ka bilaabeen Somalia sannadkii 2007-dii.
AFRICOM waxay kaloo sheegeen inay bishan November 14-dii qaadeen duqeymo dhinaca Cirka oo ay la beegsadeen Dagaalamayaal Alshabaab oo ku sugnaa meel 60 mayl dhanka W/galbeed kaga toosan magaalladda Muqdisho, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Duqeyntaasi ayaa lagu sheegay inay ahayd tii 5-aad ee ay qaadeen Toddobaadkii la soo dhaafay oo keliya.
Bilowgii bishan, Maraykanka waxay ballaariyeen duqeymaha ay ka fuliyaan gudaha Somalia. Waxaana duqeymahaasi ka mid ahaa mid lala beegsaday Maleeshiyadda Kooxda Daacish ee ku sugan W/bari Somalia.
Duqeymaha ka dhanka ah Kooxda Daacish-ta Somalia ee ay Maraykanka fuliyeen ayaa la sheegay inay gaarayaan 5 duqeyn oo ka mid ah 8- da jeer ee Duqeymaha ay Maraykanka bishan ka fuliyeen gudaha Somalia.
Kordhinta Duqeymahaasi ayaa la sheegay inay daba joogto Go’aankii uu Maamulka Madaxweyne Donald Trump bishii March ku fasaxay in ay Ciiddankiisa awood u isticmaalaan Weeraradooda ka dhanka ah Alshabaab.
Sidoo kale, Waaxyaha Difaaca iyo Arrimaha Dibedda ee Maraykanka waxay labadooda ku eedeeyeen Alshabaab inay dileen boqolaal ka tirsan Ciiddanka AMISOM iyo kuwa DFS, kadib, markii ay ku weerareen Saldhigyadii ay Ciiddankaasi ku lahaayeen qeybo ka mid ah Koonfurta Somalia